Cleankpụrụ Nhicha data na-adịkarị na Excel | Martech Zone
Ruo ọtụtụ afọ, ejiri m mbipụta a dị ka akụ iji kọwaa naanị otu esi eme ihe, kamakwa iji debe ndekọ maka onwe m iji lelee anya ma emesịa! Taa, anyị nwere onye ahịa nke nyefere anyị faịlụ data ndị ahịa nke bụ ọdachi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ọhịa ọ bụla ka emezigharịrị na; n'ihi nke a, anyị enweghị ike ịbubata data ahụ. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ nnukwu ihe mgbakwunye maka Excel iji mee ihe nhicha ahụ site na iji Visual Basic, anyị na-agba Office maka Mac nke na-agaghị akwado macros. Kama nke ahụ, anyị na-achọ usoro ziri ezi iji nyere aka. Echere m na m ga-ekerịta ụfọdụ n'ime ndị ebe a ka ndị ọzọ nwee ike iji ha.
Wepụ Characters na-abụghị Ọnụ Ọgụgụ
Sistemụ na-achọkarị nọmba ekwentị ka etinyere ya na akara aha ya, nọmba 11 nke nwere akara mba na enweghị akara edemede. Agbanyeghị, ndị folks na-abanyekarị na data a na dashes na oge kama. Nke a bụ nnukwu usoro maka na-ewepu mkpụrụedemede niile na-abụghị ọnụọgụ na Excel. Usoro ahụ na-enyocha data dị na sel A2:
Ugbu a ị nwere ike i copyomi dapụtara na kọlụm na-eji Dezie> Tapawa ueskpụrụ dee ihe data na nke a formatted nke ọma.
Nyochaa otutu ubi na OR
Anyị na-ehichapụkarị ihe ndekọ na-ezughị ezu site na mbubata. Ndị ọrụ anaghị achọpụta na ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-ede usoro nchịkwa dị mgbagwoju anya na ị nwere ike ide ederede OR kama. N'ihe atụ a n'okpuru, Achọrọ m ịlele A2, B2, C2, D2, ma ọ bụ E2 maka data efu. Ọ bụrụ na data ọ bụla na-efu, aga m eweghachite 0, ma ọ bụghị 1. Nke ahụ ga-enyere m aka ịhazi data ahụ ma hichapụ ihe ndekọ ndị ezughi oke.
Kpaa na ubi dị iche iche
Ọ bụrụ na data gị nwere mpaghara Aha Mbụ na Aha Ikpeazụ, mana mbubata gị nwere mpaghara aha zuru oke, ịnwere ike ijikọ mpaghara ahụ ọnụ nke ọma site na iji wuru na Excel Function Concatenate, mana gbaa mbọ jiri TRIM wepu oghere ọ bụla tupu ma ọ bụ mgbe ederede. Anyị ji TRIM mechie mpaghara ahụ dum ma ọ bụrụ na otu mpaghara ahụ enweghị data:
Lelee maka Adreesị Email Dị Mma
A mara mma dị mfe usoro na-achọ ma na @ na. na adreesị ozi-e:
Wepụ Aha mbụ na Aha Ikpeazụ
Mgbe ụfọdụ, nsogbu na-abụghị. Data gị nwere aha aha zuru oke mana ịkwesịrị ịkọwa aha mbụ na aha ikpeazụ. Usoro ndị a na-achọ ohere n'etiti aha mbụ na aha ikpeazụ wee jide ederede ebe ọ dị mkpa. Ọ na-ejikwa ya ma ọ bụrụ na enweghị aha ikpeazụ ma ọ bụ na e nwere oghere oghere na A2.
Na aha ikpeazụ:
Amachi Number nke Characters na Add…
Did nwetụla mgbe ị chọrọ hichaa nkọwa meta gị? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọrọ ọdịnaya n'ime Excel wee belata ọdịnaya maka ojiji na mpaghara Meta Nkọwa (mkpụrụedemede 150 ruo 160), ị nwere ike ime nke ahụ site na iji usoro a Mpaghara m. Ọ cleanly etịbede nkọwa na a ohere wee kwukwara…:
N'ezie, ihe ndị a abụghị ka ha bụrụ ihe zuru ezu… naanị ụfọdụ ngwa ngwa iji nyere gị aka ịmalite mmalite! Kedu usoro ndị ọzọ ị hụrụ iji onwe gị? Tinye ha na nkwupụta m ga-enye gị otuto ka m na-emelite edemede a.
Tags: lelee adreesị email kachadezie ụkpụrụ madoexcelExcel namee ka adreesị email dị mmaExcel concatenateExcel chọtausoro kacha mmausoro dị mmaExcel aka ekpeExcel ziri ezinyocha kacha mmaExcel gbawaraỌkpụkpọ nọmba ekwentịusoroMicrosoft ExcelMicrosoft OfficeọnụọgụTapawa ụkpụrụ